Ingiriiska Iyo Shiinaha Oo Khilaaf Culus Ka Dhex Taagan Yahay Iyo Beijing Oo Digniin U Dirtay London - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaIngiriiska Iyo Shiinaha Oo Khilaaf Culus Ka Dhex Taagan Yahay Iyo Beijing Oo Digniin U Dirtay London
Ingiriiska Iyo Shiinaha Oo Khilaaf Culus Ka Dhex Taagan Yahay Iyo Beijing Oo Digniin U Dirtay London
Beijing (JO) – Shiinaha ayaa ka digay UK iney ka ka qoomameyn doonto cawaaqib xummada ka dhalata haddii ay sii waddo waddada khaldan ay ku socota oo ay ku faragelineyso arrrimaha Hong Kong.
UK waxay Isniinti ku dhawaaqday iney hakisay heshiiski Shiinaha lala galay ee ku saabsanaa Hongkong iyada oo jawaab uga digeyso sharciga uu Shiinaha doonayo inuu Hongkong uu ka hirgeliyo.
Danjiraha Shiinaha u fadhiya UK oo ka jawaabayo hadalka ka soo yeeray UK wuxuu sheegay iney UK “si ulakac ah u soo farageliso” arrimaha gudaha dalka Shiinaha.
Liu Xiaoming wuxuu sheegay “Shiinaha weligii ma faragelinin arrimaha gudaha UK. UK waa iney sidaasi oo kale ka sameysaa arrimaha Shiinaha.”
Horraantii bishan Ra’isal wasaaraha UK Boris Johnson wuxuu ku baaqay iney 3 malyan oo qof oo ka mid ah shacabka Hong Kong uu siinayo dhalashada UK si ay dalkaasi u degaan, isaga oo sheegay in dadkaasi loo oggolaanayo iney soo codsadaan dhalashada dalka UK.
Waxay sida oo kale dowladda UK ay shaaca ka qaadday dalka UK iney ka joojineyso adeegga internetka 5G ee laga leeyahay Shiinaha in gudaha dalkaasi laga isticmaalo.
Tallaabbooyinkan UK ay ku dhawaaqday iney qaadeyso ayaa imanaya xilli uu Shiinaha iisu diyaarinayao sharci amniga ku saabsan oo uu ka hirgelin rabo Shiinaha, sharcigaasi oo la sheegay inuu shacabka halkaasi ku nool xadgudub dhinacya badan uu u horseedayo, sharigana wuxuu oggolaanayaa in maxkamadeeyo dal weynaha Shiinaha.
Kooxaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha dimuqraadiyadda Hog-Kong waxay sharcigaasi ku sheegeen dadka arrimahaasi u ololeeya in xukun dil ah lagu qaado.
Sida oo kale, Xogahayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo Isniinti gaaray magaalada London oo Ra’isal wasaaraha UK wada hadal la yeeshay wuxuu kala hadlay arrima ay ka mid yihiin Shiinaha iyo cudurka safmarka ee Coronavirus.
Sharcigan ammaanka uu Shiinaha doonayo inuu ka hirgeliyo Hongkong ayaa la sheegay inuu ka horimanayo heshiiska UK oo Hongkong guumeysan jirtay iyo Shiinaha ay gaareen 1997-kii.
Heshiiskaasi oo dhaqangalkiisu uu soconayo 50 sano oo ay labada dal wada galeen ayaa muwaaddiniinta Hongkong siinaya xuquuqa badan oo ay ka mid yihiin iney mudaharaadaan ayna yeeshaan maxkamado madax bannaan.
Xoghayaha arrimaha dibadda UK Dominic Raab wuxuu Isniinti shaaca ka qaaday in la hakiyey heshiiki Hongkong ee ay UK iyo Shiinaha wada galeen.
“Waxaan odhanayaa sidan: UK waxa socda isha ayey ku haysaa caalamkana wuu daawanayaa,” ayuu yiri.
Danjiraha Shiinaha ee UK Liu wuxuu bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray UK “iney khilaafsan tahay shuruucda caalamiga ah iyo xeerarka caalamiga”.
War qoraal ah oo ay safaaraddu boggeeda ku soo daabacday ayey ku sheegtay: “Shiinaha inuu UK ugu baaqaya iney joojiso faragelinta ay ku hayso arrimaha Hongkong, taasoo faragelineyso arrimaha gudaha Shiinaha, taasina aan marnaba la aqbaleyn.
“UK wey ka qoomameyn doontaa natiijada ka dhalata waddada khaldan ee ay hayso.”
Mr Raab wuxuu Axaddi uu Shiinaha ku eedeeyey iney gabi ahaanba ay xuquuqda aadanaha ku xadgudubto isaga oo sida oo kale carabaabay iney ku xadgudubtay xuquuda aasaasiga ah ee ay lahaayeen bulshada Uighur ee ku nool dalka Shiinaha.
Yuusuf Garaad Oo Soo Jeediyey In Hal Arrin Laga Beddelo Wada-Hadallada Ka Socda Dhuusamareeb
Tigreega Oo Cadho Ka Muujiyey Booqashooyinka Abiy Ahmed Ku Tegay Eritrea Iyo Deegaanka Oo Dagaal U Diyaar-garoobaya